Iindlela ezingama-20 zokufumana iMixholo yakho yokuBekwa ngokuBhetele kunoMntu okhuphisana naye | Martech Zone
Kuyandothusa ukuba zininzi kangakanani iinkampani ezisebenza nzima ezibeka kwisicwangciso somxholo ngaphandle kokujonga kwiindawo ezikhuphisanayo kunye namaphepha. Andithethi kukhuphiswano lweshishini, ndithetha okhuphisana nabo ngezinto eziphilayo. Sebenzisa isixhobo esinjengeSemrush, inkampani inokukwazi ukwenza uhlalutyo olukhuphisanayo phakathi kwendawo yabo kunye nesayithi elikhuphisanayo ukuchonga ukuba yeyiphi imigaqo eqhuba ukugcwala kukhuphiswano ekufuneka endaweni leyo ikhokele kwindawo yabo.
Ngelixa uninzi lwenu lusenokucinga ukuxhuma umva kufanele ukuba sisicwangciso, andivumelani. Ngelixa ukubuyela umva kungakhokelela kwizikhundla eziphezulu zexesha elifutshane, ingxaki yile umxholo olungcono Ndiza kuhlala ndiphumelela ekuhambeni kwexesha. Injongo yakho kufuneka ibe kukudala umxholo olungcono ngokungaphaya kunendawo epapashiweyo. Xa usenza umsebenzi ongcono kunabo, uya kuthi fumana amakhonkco ngaphaya kwento onokuyisebenzisa ngesandla.
URoss Hudgens weSiege Media uneposti eneenkcukacha Uyonyusa njani ukugcwala kwiwebhusayithi ngama-250,000 + yondwendwelo lwenyanga nge-infographic ngendlela yokubeka umxholo ngcono. Ngokwam, andikhathali kangako malunga nokufumana iitoni zabatyeleli kule ndawo njengoko ndenzayo malunga nabakhenkethi abasemgangathweni abaya kuthi babhalise, babuye, kwaye baguqule. Kodwa i-infographic yigugget yegolide kuba ichaza indlela yokubeka umxholo wakho ngcono. Esi sisicwangciso esisisebenzisa ngalo lonke ixesha kwizicwangciso zethu zomxholo kunye nabaxumi.
Ukubeka njani uMxholo ngcono
Thumela i-Slug -Hlela iposi yakho slug kwaye wenze i-URL yakho ibe mfutshane. Qaphela ukuba le URL yindawo yethu yokongeza kwi njani-kwinqanaba-lomxholo-ongcono, i-URL elula, engalibalekiyo yokuba abasebenzisi beenjini yokukhangela baya kuba nakho ngakumbi ukucofa kwaye babelane.
Iindidi zoMxholo - iaudiyo, iigrafiki, oopopayi, umxholo onxibelelanayo, ividiyo… nantoni na onokuyenza eyenza ukuba umxholo wakho ugqame kwaye kwabelwane ngokulula ngawo kuya kufumana ingqalelo ethe kratya. Ngu kutheni sithanda kwaye sikhula Imizobo emincinci yemidiya yoluntu.
Isihloko Sekhasi -Ukusebenzisa amagama aphambili kubalulekile, kodwa ukwenza isihloko esifanelwe ukucofa kuso sisicwangciso esihle. Sihlala sipapasha isihloko sephepha esahlukileyo kunesihloko senqaku, esilungiselelwe ngokukodwa ukukhangela. Nceda ungabambisi abasebenzisi bokukhangela abanezihloko ezingadibaniyo, nangona. Uya kuphulukana nokuthembeka kunye neendwendwe zakho.
Ukubhala ngokulula -Siphepha isigama esintsonkothileyo kunye nama-acronyms emizi-mveliso kangangoko sinako - ngaphandle kokuba sibandakanya iinkcazo kunye neenkcazo zazo ukunceda iindwendwe zethu. Asizami ukuphumelela ibhaso loncwadi ngomxholo wethu, sizama ukwenza ukuba izihloko ezintsonkothileyo kube lula ukuziqonda. Ukuthetha kwinqanaba lonke undwendwe olunokuluqonda kubalulekile.
Ubume bekhasi - Umxholo ubekwe kwindawo yokuqala ukuba uluhlu luneebhulethini ezingama-78% zexesha. Ukulungelelanisa iphepha lakho libe ngamacandelo anokufundeka ngokulula kuvumela abafundi ukuba bakuqonde kube lula. Uluhlu lwabafundi luthando kuba baphanda kwaye banokukhumbula ngokulula okanye bajonge izinto abazifunayo okanye abangazinanziyo.
Iifonti ezifundekayo -Ukuhlengahlengisa ubungakanani befonti enxulumene nesixhobo kubalulekile kwezi ntsuku. Izisombululo zescreen ziyaphindaphindeka rhoqo kwiminyaka embalwa, ke iifonti ziya ziba nancinci kwaye zincinci. Amehlo abafundi adiniwe, ke thatha lula kubo kwaye ugcine iifonti zakho zikhulu. Ubungakanani bomndilili wephepha lePhepha # 1 kuluhlu lwe-15.8px
Amaxesha okulayisha ngokukhawuleza -Ayonto ibulala umxholo wakho njengamaxesha omthwalo ocothayo. Kukho itoni izinto ezichaphazela isantya sephepha lakho, kwaye kufuneka uhlale uzama amaxesha akhawulezayo kunye nokukhawulezisa umthwalo.
Iziboniso -Umndilili wenqaku eliphakathi lokuqala lalinemifanekiso eli-9 ngaphakathi kwiphepha kubandakanya imifanekiso, iidayagramu, kunye neetshathi ezinyanzelisayo kunye nokwabelana ngazo kubalulekile.
iifoto -Ukubamba iifoto ezifanayo esitokhwe njengewaka lesinye indawo akuncedi wenze umyalezo owahlukileyo. Xa sifota umfoti wethu ukuba enze ifoto kunye neenkampani esisebenza nazo, sikwanazo ukuba zithathe ikhulu okanye zibonise ifoto ejikeleze iofisi kunye nokwakha. Sifuna iifoto ezinyanzelayo ezahlula umxhasi kwabo bakhuphisana nabo. Imifanekiso ekumgangatho ophezulu ifumana i-121% yezabelo ngaphezulu
Amaqhosha okwabelana ngokuntywila -Ukudala umxholo omkhulu akonelanga ukuba awenzi kube lula ukuba umxholo wabelwane ngawo. Senza kube lula ngamaqhosha alungiselelwe ngasekhohlo, ekuqaleni, nasekupheleni kwawo onke amaqhekeza omxholo. Kwaye kuyasebenza!
infografikhi Izikrini ezinkulu zifuna imifanekiso emihle, emikhulu okanye infographics ekholisayo. Asivelisi i-infographics ebanzi kuba kunzima ukuyabelana kwezinye iisayithi. Ukuvelisa infographics emangalisayo Ezinde kwaye ezibonakalayo ezibonakalayo zisinceda ukuba sitsalane, sichaze, kwaye siguqule iindwendwe ezininzi.
Links -Iimpapasho ezininzi zithintela amakhonkco aphuma kuzo zonke iindleko kwaye ndiyakholelwa ukuba yimpazamo. Okokuqala, ukubonelela ngekhonkco kumxholo obalulekileyo ofunwa ngabaphulaphuli bakho kunyusa ixabiso lakho njengomgcini kunye nengcali kubo. Ibonisa ukuba unikela ingqalelo kwaye uyayixabisa imixholo emikhulu. Okwesibini, kunye nee-algorithms ezihlaziyiweyo kukhangelo, asibonanga kuncipha kwigunya lethu ngeetoni zonxibelelwano oluphumayo.
Umxholo ubude -Siyaqhubeka nokutyhala ababhali bethu ngamanye amanqaku achazayo, anempilo kwizihloko. Singaqala ngamanqaku athile alula ukuze umfundi askene aze asebenzise izihlokwana ukwahlula amaphepha abe ngamacandelo. Siyafefa Melele kwaye kugxininiswa Ukusetyenziswa kwethegi kuyo yonke into ukubamba ingqalelo yomfundi.
Yabelana ngeNtlalo -Asihlangani nje umxholo wethu kube kanye, sabelana ngomxholo wethu amaxesha amaninzi kwiziteshi zethu zentlalo. Imidiya yokuncokola ifana netiki apho abantu bahlala befumanisa ngexesha lokwenyani. Ukuba upapashe inqaku ngaphandle kwexesha umlandeli elihoyileyo, ulahlekile.
Beka umxholo wakho -Icandelo elibalulekileyo labaphulaphuli bethu ngabantu abangahlali rhoqo kwindawo yethu- kodwa bayayifunda incwadana yethu okanye baphendule kumxholo wamabali abawufumene unomdla. Ngaphandle kweleta yeendaba okanye inkampani yobudlelwane noluntu inyanzelisa umxholo wethu kubaphulaphuli abafanelekileyo, ngekhe sabelane kangangoko. Ukuba asabelwanga, asidibaniselwanga. Ukuba asizukunxibelelana, asizukubeka sikhundla.
Ukubeka njani umxholo nokuba ungcono
Siyaluthanda olu luhlu, kodwa sifuna ukwabelana ngezinto ezimbalwa ebezingahoywanga kodwa kakhulu, zibaluleke kakhulu:
umbhali -Yongeza umbhali wencwadi kumaphepha akho. Njengabafundi abakhangela amanqaku kwaye babelane ngawo, bafuna ukwazi ukuba umntu onobuchule ubhale inqaku. Isiqwenga somxholo esingabhalwanga asihlukanga kangako njengombhali, ifoto, kunye ne-bio ebonelela ngesizathu sokuba baphulaphulwe.
Iifomathi eziSelfowuni -Ukuba iphepha lakho alifundeki ngokulula, ngokungathi kunjalo ngefomathi yeGoogle ekhawulezileyo yeSelfowuni (i-AMP), ngekhe ubekwe kwinqanaba lokukhangela ngeselula. Kwaye ukukhangela okushukumayo kukhula ngokunyuka.
UPhando oluPhambili -Ukuba inkampani yakho ineenkcukacha zeshishini lokuthengisa ezinokubaluleka kwithemba lakho, yigrumbele kwaye unike uhlalutyo loluntu. Uphando olusisiseko luyigolide kwaye kwabelwana ngalo rhoqo kwi-Intanethi. Ngexesha elifanelekileyo, idatha eyinyani ifunwa kakhulu kukushicilelwa kwemizi-mveliso, abachaphazeli, kunye nabo ukhuphisana nabo.
Uphando oluPhezulu lweSekondari -Jonga ezantsi kwale infographic kwaye uyakufumanisa ukuba benze uphando lwabo-ukufumana ngaphezulu kweshumi elinambini lemithombo yophando eyipenda umfanekiso ocacileyo wento efunekayo. Ngamanye amaxesha ukulungelelanisa kunye nokukhupha igolide kunika lonke ulwazi olifunayo.
Bhatalela uKwazisa Ukunyusa okukhokhelwayo okuhlawulelweyo, ukunyuswa okuhlawulelweyo kwezentlalo, ubudlelwane boluntu, intengiso yemveli… zonke ezi zizinzile, zijolise kutyalo-mali kwezi ntsuku. Ukuba uza kungena engxakini yokudala umxholo omkhulu-kungcono ube nohlahlo-lwabiwo mali olushiyekileyo ukuze ulukhuthaze!
tags: ubude bomxholoisayizi yefontiimifanekisoukudibanisaAmanani entengisouphando lwezinto eziphilayoUhlobo lokukhangela eziphilayoamakhonkco aphumayoisihloko sephephaiifotoiposi slugisikhundlaSEOisihloko sayoamaqhosha okwabelanaurl
Epreli 12, 2016 ngo-10: 18 PM
Ngokwenene iPosti enkulu. Ndiyayithanda i-infographic ukuba siyenza njani i-UI yeMveliso.
Epreli 15, 2016 ngo-4: 24 PM
Lithande eli nqaku uDougie! Ulwazi olufanelekileyo kakhulu 🙂
Epreli 16, 2016 ngo-1: 34 PM
Meyi 4, 2016 kwi-4: 04 PM
Olona nxalenye lusisiseko, kodwa kubaluleke kakhulu ulwazi. Enkosi ngokusikhumbuza ngokubalulekileyo.
Isongezo esinye kukukhumbula ukwenza iintloko zakho zibe neemvakalelo. Khumbula ukuba ngubani ekujolise kuko kwintengiso kwaye ujongane neendawo zabo zentlungu ngokubhena ngokweemvakalelo.
Meyi 4, 2016 kwi-9: 13 PM
Impendulo entle Annie kwaye siyavuma ngokupheleleyo! Ukuthinta imvakalelo yindlela enamandla yokukhuthaza umfundi wakho.